Ogaden News Agency (ONA) – Deg Deg: Kacdoon Wadayaasha Axmaarada oo Weeraray Xabsiga Gojam.
Deg Deg: Kacdoon Wadayaasha Axmaarada oo Weeraray Xabsiga Gojam.
Posted by Dulmane	/ July 24, 2017
War dag dag ah oo hada nasoo gaadhay ayaa sheegaya dagaal faraha laysula tagay oo kadhacay magaalada Gojam ee dhulka Axmaarada, dagaalkan ayaa lasheegayaa in uu udhaxeeyo dadka deegaanka ee kacdoon wadayaasha ah iyo ciidanka Booliiska wayaanaha.
Sida aan xogta kuhelayno kacdoon wadayaasha magaalada Gojam ayaa weerar xoogan kuqaaday saldhig ay ciidanka Booliisku kuleeyihiin magaalada Gojam oo lagu magacaabo Finota Salam.
Xabsiga laweeraray ee Finota Salam ayaa lasheegayaa in ay kujireen maxaabiis aad ubadan oo kamid ah dhalintii kacdoonka kula jirtay taliska wayaanaha, waxaana lasoo warinayaa in ay kacdoon wadayaashu weerarkan u adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan.
Goob joogayaal ka agdhawaa xabsiga laweeraray ayaa sheegaya in ay kacdoon wadayaashu mudo kooban kuqabsadeen xabsigii iyagoo sida uu goob jooguhu sheegay ay dablaydu jabinayeen albaabada xabsiga.
Lama oga khasaaraha rasmiga ah ee kadhashay xabsiga laweeraray iyo tirada maxaabiista laga siidaayay toona, waxaase larumaysan yahay in uu khasaare culus kadhashay iska hor imaadka kadhacay xabsiga Finota Gudihiisa.
Sidoo kale ciidamo aad ubadan oo kuwa wayaanaha ah ayaa lasheegayaa in ay gurmad ahaan ugu baxeen goobta uu dagaalku kadhacay, waxaana lasaadaalinayaa in ay dhibaato ugaysan doonaan dadka shacabka ah ee deegaankaas ka agdhaw.
Dhinaca kale jabhada Gimbot 7 ee kadagaalanta dhulka Axmaarada ayaa sheegtay in ay hal dhumay iyo hal dhaan raacay kadhigtay ciidan uu wayaanuhu leeyahay oo jidka ay ugaleen, waxayna jabhadu sheegtay in ay ciidankii ay jidgooyada udhigeen kadhigeen wax ay dilaan iyo wax ay dhaawacaan.
Sikastaba ha ahaatee xiisada Gobolka Axmaarada ayaa maalinba maalinta kadambaysa kasii daraysa waxaana la arkayaa ciidanka wayaanaha oo iyagoo niyad jabsan shacabka ka iibsanaya qoryahooda.